Naqshad Cusub 1P, 2P, 3P, 4P, 125A Beddelka Buugga Buugga
AS (M) -125 rakibaadda taxanaha ah iyo buugga hawlgalka Xaaladaha caadiga ah ee shaqada 1. Heerkulka hawadu waa -5 ℃ ～ + 40 ℃, celceliska qiimaha 24 saacadood gudahood waa inuusan ka badnaan 35 ℃. Qoyaanka qaraabada ahi waa inuusan ka badnaan 50% heerkulka ugu sarreeya + 40 ℃, qoyaanka badan ee qaraabada ah waa loo oggol yahay halka hoose ...
Maxay tahay sababta loo yaqaan 'Zinc Oxide light arrester' caan ku tahay?
Aaladda nalka loo yaqaan 'Zinc Oxide light arrester' waxaa loo adeegsadaa in laga ilaaliyo qalabka korontada nooc kasta oo ka mid ah koronto-xumada ka dhalata iftiinka ama howlaha wareejinta. (Khadka xariijinta nalalka Zinc Oxide iyadoo la adeegsanayo) Qabqablayaasha kacsan ee difaaca adduunka ugu horumarsan, kana sameysan bir-oksaydh (MO) ...
Ku saabsan Is-bogsashada Nooca Shunt Power Capacitor
Waxaa jira faahfaahin ku saabsan B (S) MJ capacitor: Is-bogsiinta Nooca Shunt Power Capacitor waxaa loo adeegsadaa nidaamka awoodda 50Hz ama 60Hz inta badan waa wax aan fiicnayn: , △ Hagaaji tayada danab. Tuuji tirada transformerka iyo sidaas o ...
Naqshad Cusub 16A Ilaa 100A 4P Beddelka Is-beddelka Tooska ah
General ASIQ labalaab koronto (hadda kadib loo yaqaan Switch) waa shido sii socon kara sii bixinta korontada haddii ay timaado xaalad deg deg ah. Wareejintu waxay ka kooban tahay biiro xamuul iyo koontarool, kaas oo inta badan loo isticmaalo in lagu ogaado in korontada ugu weyn ama soo dhaweynta korantada ay caadi tahay. Markii ...
1, Maalinta koowaad ee bisha koowaad ee bisha lama oran jirin xilligii gu’ga xilliyadii hore, laakiin waxaa loogu yeeri jiray maalinta sannadka cusub. 2, Taariikhda Shiinaha, erayga "Iiddii Guga" maahan iid, laakiin tixraac gaar ah ayuu u yahay "Bilowgii Guga" ee 24 qorraxda ter ...
KEMA waa soo gaabinta Dutch (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Baaxadda ganacsiga ee KEMA si tartiib tartiib ah ayey u ballaarisay, Oo waxay noqotay hoggaamiye madax bannaan oo hoggaamiya warshadaha adeegyada tamarta adduunka. In ka badan 80 sano, KEMA waxay ka caawinaysay macaamiisha inay saadaaliyaan jihada isbedelka iyo ...
Bannaanka 33kV 35kV 36kV 1250A Vacuum Circuit Breaker oo leh Transformer Hadda
Bannaanka 33kV 35kV 36kV 1250A Vacuum Circuit Breaker oo leh Transformer. Si fiican ugama shaqeyn karo heerkulka jawiga: - 40 ℃ ~ + 40 ℃. Qaab dhismeedka fudud, dayactirka bilaashka ah iyo nolosha adeegga muddada dheer waxaa loo isticmaalaa heerka danab ee 35kV, oo ay ku jiraan khadadka dusha sare, shirkadaha warshadaha iyo macdanta, saldhigyada korontada, ...
Maxay tahay in mitirka loo qalabeeyo qalabka wax lagu beddelo? Tani waa in laga fogaado in mitirka la gubo oo lacag la badbaadiyo. Marka la eego keydinta lacagta, sicirka mitirka yar ee hadda socda oo leh transformer ayaa ka hooseeya kan mitirka weyn ee hadda socda. Marka laga eego dhinaca nabadgelyada mitirka korantada ...
bannaanka mabda'a bareeraha wareegga
Wareegga, bareeraha wareegga wuxuu u shaqeeyaa sida fiyuuska oo kale, laakiin fiyuusku wuxuu shaqeyn karaa hal mar oo keliya, halka kuwa wareejiya wareegga loo isticmaali karo si isdaba joog ah. Ilaa iyo inta ay hadda gareyso heer halis ah, waxay isla markiiba sababi kartaa wareeg wareeg ah. siligga nool ee wareega wuxuu ku xiran yahay labada daraf ee sw ...
Noocyada goynta fiyuuska ka-baxa
(1) Faa'iidooyinka ugu weyn ee goynta fiyuuska ka-baxa po Xulashada wanaagsan. Ilaa iyo inta heerka la qiimeeyay ee isku xira fiyuuska ee fiyuuska heerka sare iyo hoose uu buuxiyo shuruudaha 1.6: 1 saamiga xulashada xad dhaafka ah ee lagu qeexay heerka qaranka iyo heerka IEC, taas oo macnaheedu yahay heerka hadda la qiimeeyay ee kor u kaca ...
COVID-19 waa cudur cusub oo fayras ah oo ku dhaca in ka badan 1 milyan oo qof adduunka oo dhan!
Waxaa la isugu gudbin karaa qof ilaa qof. Feyraska waxaa la rumeysan yahay in badanaa la isugu gudbiyo qof ilaa qof. Inta udhaxeysa dadka xiriirka dhow (qiyaastii 2m). Dhibcaha neefsashada ee uu soo saaro qof cudurka qaba markay qufacayaan, hindhisaan ama hadlaan. Dhibcahaan biyaha ah waxay ku dhici karaan afka ama sanka ...
Naqshad Cusub 1P, 2P, 3P, 4P, 125A Chan Manual ...
Ku saabsan Is-bogsashada Nooca Shunt Power Capac ...
Naqshad Cusub 16A Ilaa 100A 4P Automatic Chang ...